China Agba Stone ntekwasa Steel ụlọ Ngidi emepụta na suppliers - Witop Steel
Home > Ngwaahịa > Okpokoro Nkume agba agba > Nkume Nkpuchi Agba Nchara ụlọ
Nkume Nkpuchi Agba Nchara ụlọ Ndị nrụpụta
0.30MM Brick Red Agba Nkpuchi mkpuchi mkpuchi ụlọ
0.30MM Brick Red Agba Nkpuchi mkpuchi nchara ụlọ bụ ihe ọhụrụ dị elu ụlọ, na-eji efere aluminom-zinc plated nke nwere ezigbo mgbochi corrosion dị ka mkpụrụ, acrylate nke dabeere na mmiri dị ka ihe nrachi, ájá nwere agba dị ka elu. oyi akwa, yana resin acrylic kacha eguzogide ihu igwe dị ka akwa elu elu. Nkume a na-eji akwa kpuchie elu ụlọ abụrụla ihe kacha ewu ewu nke ihe ụlọ elu mba ụwa, a na-ejikwa ya na ụlọ ndị nwere elu ụlọ n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya nwere ọmarịcha ọdịdị ya, ịdị arọ ya, ịdịte aka ya na nchedo gburugburu ebe obibi.
Oge gboo agba Stone kpuchie elu ụlọ
Classical Color Stone Coated Steel Roof Tile bụ ihe eji arụ ụlọ dị elu dị elu, na-eji efere aluminom-zinc plated nwere arụmọrụ mgbochi dị mma dị ka mkpụrụ, acrylate mmiri dị ka ihe nrachi, ájá agba aja aja dị ka akwa elu, na resin acrylic nke na-eguzogide oke ihu igwe dị ka akwa elu elu. Nkume a na-eji akwa kpuchie elu ụlọ abụrụla ihe kacha ewu ewu nke ihe ụlọ elu mba ụwa, a na-ejikwa ya na ụlọ ndị nwere elu ụlọ n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya nwere ọmarịcha ọdịdị ya, ịdị arọ ya, ịdịte aka ya na nchedo gburugburu ebe obibi.
0.40mm Agba Nkume kpuchie mkpuchi ụlọ
0.40MM Agba Nkpuchi mkpuchi nchara ụlọ ụlọ bụ ihe ọhụrụ dị elu ụlọ, na-eji efere aluminom-zinc plated nke nwere ezigbo mgbochi corrosion dị ka mkpụrụ, acrylate nke dabeere na mmiri dị ka ihe nrachi, ájá agba aja aja dị ka akwa elu, na resin acrylic kacha eguzogide ihu igwe dị ka akwa elu elu. Nkume a na-eji akwa kpuchie elu ụlọ abụrụla ihe kacha ewu ewu nke ihe ụlọ elu mba ụwa, a na-ejikwa ya na ụlọ ndị nwere elu ụlọ n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya nwere ọmarịcha ọdịdị ya, ịdị arọ ya, ịdịte aka ya na nchedo gburugburu ebe obibi.
European na American Standard Stone ntekwasa Steel ụlọ Ngidi Maka Building ihe
European na American Standard Stone Coated Steel Roof Tile Maka ihe owuwu ụlọ bụ ihe ọhụrụ dị elu ụlọ, na-eji efere aluminom-zinc plated nke nwere ezigbo mgbochi corrosion dị ka mkpụrụ, acrylate mmiri dị ka ihe ngegide, ájá nwere agba aja aja. elu oyi akwa, yana resin acrylic nke na-eguzogide oke ihu igwe dị ka akwa elu elu. Nkume a na-eji akwa kpuchie elu ụlọ abụrụla ihe kacha ewu ewu nke ihe ụlọ elu mba ụwa, a na-ejikwa ya na ụlọ ndị nwere elu ụlọ n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya nwere ọmarịcha ọdịdị ya, ịdị arọ ya, ịdịte aka ya na nchedo gburugburu ebe obibi.
Osisi Galvalume nwere agba nwere mkpuchi ụlọ
Agba Galvalume Agba Nkume Ejiri mkpuchi ụlọ dị elu bụ ihe ọhụrụ dị elu ụlọ, na-eji efere aluminom-zinc plated nwere arụmọrụ mgbochi dị mma dị ka mkpụrụ, acrylate nke dabeere na mmiri dị ka ihe nrachi, ájá agba aja aja dị ka akwa elu, na resin acrylic kacha eguzogide ihu igwe dị ka akwa elu elu. Nkume a na-eji akwa kpuchie elu ụlọ abụrụla ihe kacha ewu ewu nke ihe ụlọ elu mba ụwa, a na-ejikwa ya na ụlọ ndị nwere elu ụlọ n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya nwere ọmarịcha ọdịdị ya, ịdị arọ ya, ịdịte aka ya na nchedo gburugburu ebe obibi.
Enwere ike ịhazi Nkume Nkpuchi Agba Nchara ụlọ emere na China na ọnụ ala ma ọ bụ ọnụ ala. Ngwaahịa anyị bụ SGS na BV gbaara ezi àmà. Na mgbakwunye, ngwaahịa anyị na -adigide ma anyị na -enyekwa akwụkwọ ikike afọ 10. Witop Steel bụ ndị nrụpụta na ndị na -ebubata ngwaahịa na China na ndị ama ama Nkume Nkpuchi Agba Nchara ụlọ. E wezụga, anyị na -akwadokwa nnukwu nkwakọ ngwaahịa. Ọ bụrụ na m nye iwu ugbu a, ị nwere ya na ngwaahịa? n'ezie! Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị ga -enye ọ bụghị naanị nlele efu kamakwa ndepụta ọnụahịa na nkwupụta. Ọ bụrụ na m chọrọ ịre ahịa, ọnụ ahịa ole ka ị ga -enye m? Ọ bụrụ na nnukwu ọnụ ahịa gị buru ibu, anyị nwere ike ịnye ọnụahịa ụlọ ọrụ. A nabatara gị ka ị bịa ụlọ ọrụ anyị ịzụta ihe ọhụrụ, ego mbelata na ogo dị elu Nkume Nkpuchi Agba Nchara ụlọ. Ị nwere ike ijide n'aka na ịzụta ngwaahịa mbelata n'aka anyị. Anyị na -atụ anya ka gị na gị rụkọọ ọrụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị ugbu a, anyị ga -aza gị n'oge!